Beijing waxay qorshaynaysaa inay hesho 1,000 guri oo lagu qiimeeyo xiddigaha shan sano gudahood
Bishii Juun 16 -keedii, Beijing waxay qabatay shirar jaraa’id oo taxane ah si loogu dabaaldego sannad -guuradii 100 -aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha, “Beijing Si Wada -jir ah Kor Ugu Qaad”. Kulanka, Kang Sen, ku xigeenka xoghayaha guddiga beeraha iyo shaqada ee dowladda hoose ee Beijing, agaasime ku xigeenka t ...
Sida Loo Doorto Kettle Electric?
Kettle koronto ayaa inta badan loo isticmaalaa nolosheena, oo ay ku jirto guriga ama hoteelka. Markaan dooneyno biyo kulul, weelasha korontada ayaa dabooli karta baahideena, laakiin qaar ka mid ah jaakadaha korontada ee aan caadiga ahayn ayaa noo keeni kara xoogaa waxyeello ah, sidaa darteed marka la eego badeecooyinka kala duwan ee jaakadaha korontada ee suuqa yaalla, maxaan yeelnaa? ...
Sida loo isticmaalo Miisaanka Miisaanka Elektaroonigga CW275 si sax ah
Miisaanka Miisaanka Elektiroonigga CW275 waa miisaan aad u sarreeya oo leh 4 dareemeyaal aad u xasaasi ah, kaas oo si sax ah u cabbiri kara culeyskaaga, laakiin waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa si sax ah u isticmaal, haddii kale, culeysku wuxuu noqon doonaa mid eex leh oo saameeya cabbirka. Haddaba sida loo isticmaalo Miisaanka Elektaroonigga ah ee S ...
Qiimaha Jaban ee Maal -galinta Hotelada ee Faafa ayaan soo gaarin
Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee hoteellada adduunka ayaan ku guulaysan wax ka qabashada dhibaatada faafa. Laakiin wali waxay rabaan inay kor u qaadaan fikradda ah inay ka qiimo badan tahay shabakadda caalamiga ah marka loo eego hawl wadeen madaxbannaan. Hawlwadeennada yaryar waxay u baahan yihiin inay aqbalaan fikraddan si ay u qabsadaan fursadda ...
Sidee Soo -saareyaashu u Xaqiijiyaan Ammaanka Timaha qalajiyaha
Fikradda aasaasiga ah ee ka dambeysa qalajiyaha timaha waa mid aad u fudud, laakiin soo saarista mid ka mid ah isticmaalka ballaaran waxay u baahan tahay xoogaa feker adag oo ku saabsan astaamaha badbaadada. Warshadaha timaha qalajiya waa inay saadaaliyaan sida timahooda qalajiyaha si khaldan loo isticmaali karo. Waxay markaa isku dayaan inay naqshadeeyaan badeecad ku badbaadi doonta noocyada ugu ballaaran o ...
Huteelada Bulgaariya ee Qaabka COVID-19: Sida taxadarka loo hirgeliyo
Ka dib muddo dheer oo hubanti la'aan ba'an iyo cabsi badan, godadka Bulgaria waxay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan mawjadaha soo qulqulaya ee dalxiisayaasha. Taxaddarrada la xiriira masiibada ee goobta ayaa si dabiici ah u noqday mid ka mid ah mowduucyada sida weyn looga dooday marka la eego xaaladda Bulgaria. Kuwa ...